Kedu ka ndị na-ere ahịa nwere ike isi nweta ohere Ecommerce International na ekeresimesi a? | Martech Zone
Kedu ka ndị na-ere ahịa nwere ike isi nweta ohere International Ecommerce na ekeresimesi a?
Na ahia zuru ụwa ọnụ maka ecommerce cross-border ugbu a bara uru na 153bn ($ 230bn) na 2014, ma buru amụma na ịrị elu na £ 666bn ($ 1 trillion) site na 2020, ohere azụmaahịa maka ndị na-ere ahịa na UK adịbeghị. Ndị na-azụ ahịa mba ụwa na-enwekarị mmasị ịzụ ahịa site na nkasi obi nke ụlọ nke ha ma nke a bụ ihe na-adọrọ adọrọ karị n'oge ezumike ahụ, ebe ọ na-ezere nnukwu ìgwè mmadụ na nrụgide nke ịzụ ahịa Krismas gụnyere.
Nnyocha si Index nke Digital na-atụ aro oge ezumike nke afọ a na-anọchi anya 20% nke mmefu ego n'ịntanetị. Site na ekeresimesi na enye otutu ndi na ere ahia, ndi ichoro nke di nkpa kwesiri ijide n’aka na ha nwere usoro kwesiri ekwesi maka inweta ohere di na intaneti - obughi n’ulo, ma na mba ofesi.
Ecommerce zuru ụwa ọnụ na-ekwe nkwa nnukwu ego inweta ego maka ndị na-ere ahịa dịka ọ na-enye ụdị ikike a na-enwetụbeghị ụdị ya iji bulie azụmaahịa ngwa ngwa na mba ụwa, na-enyere ha aka ịnye ndị ahịa ha ngwaahịa ha n'ahịa mba ọzọ, na-enweghị mkpa maka ọnụnọ anụ ahụ. Nkwekorita ịnyefe ahụmịhe ahịa na-enweghị ntụpọ ga-abụ ike na-akwalite ahịa zuru ụwa ọnụ na ekeresimesi a.
Nsogbu bụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-esikarị ike ịkụnye nnukwu ahịa ala nna na ahịa mba ụwa. Nke a bụ n'ihi ihe mgbochi dị iche iche na-egbochi ecommerce dị ka ọnụego mbufe dị elu, ọrụ mbubata amabeghị, enweghị ike ịlaghachi azụ, yana nsogbu na-akwado ego mpaghara na usoro ịkwụ ụgwọ Okwu ndị a buru ibu dị arọ na asọmpi ekeresimesi asọmpi ebe ndị ọrụ ahịa dara ogbenye ga-eziga ndị ahịa ahịa na ebe ọzọ.
Isi iwu nke azụmahịa mba ụwa bụ na, iji nwee ihe ịga nke ọma, ndị ahịa ga-enwerịrị ahụmịhe ịzụ ahịa dị ukwuu n'agbanyeghị ọnọdụ ha. Ndị na-ere ahịa na ndị ahịa ekwesịghị ịmeso ndị ahịa gafere oke mpaghara dịka klaasị nke abụọ. Iji mee ka ndị ahịa mba ụwa niile na-emekọrịta ihe, ndị na-ere ahịa kwesịrị ijide n'aka na onyinye ha na mpaghara ha dị mfe, mpaghara na nghọta.
Ihe anọ na-esonụ bụ ihe dị mkpa:
Nwee otutu nhọrọ mbufe na onu ogugu. Ejikọtara ya na nke a, ịnye usoro nlọghachi dị mfe na enweghị ihe ọghọm dị oke mkpa maka ndị ahịa ọ bụla ka ọ na-etinye ha obi ike iji zụta gị n'ịntanetị.
Nye ego obodo; enwere ihe ole na ole na-etinye ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị karịa ka ọ dị mkpa ịgbakọ ọnụ ahịa na ego nke aka ha mgbe ị na-eme nchọgharị, ọ bụghị ikwu ọnụego ejighị n'aka.
Ebumnuche mgbe niile iji mee ka uche ndị ahịa dị jụụ. Zere ihe ijuanya ọ bụla nwere ike ịre ndị ahịa (wdg. Ụgwọ ebubo kọstọm na iji ụgwọ sitere n'aka ndị na-ebu ya)
N'ọtụtụ oge, zere ịtụgharị ọdịnaya weebụsaịtị gị ma ọ bụ wuo saịtị mpaghara. Ọrụ ndị a chọrọ nnukwu ego ma na-ewepụta obere nloghachi, yabụ, jigide ihe ọ bụla ruo mgbe ị gosipụtara onwe gị n'ime ahịa.
Branddị enweghị ike ileghara ohere ecommerce gafere ókèala ekeresimesi a. Imezu nke a abughi ihe choro oke oge na itinye ego n’ime ulo; ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọta onye mmekọ ụwa maka ịkwalite mkpa ha ma zute atụmanya ahịa nke mba ụwa, na-eme ka ROI nke ịga ụwa niile
Ndị mmekọ teknụzụ dịka Global-e nwere ike ịkwado ndị na-ere ahịa na ịnye ahụmịhe zuru ụwa ọnụ na enweghị ahịa ma nye ndị ahịa ọkwa ọrụ dị oke mkpa n'ahịa ahịa asọmpi. Na-enweghị mmesi obi ike nke ahụmịhe metụtara mpaghara, oge ziri ezi maka nnyefe ma ọ bụ izi ezi nke gburugburu ọnụ ahịa nke ire ere, ndị na-ere ahịa ga-abụ ndị na-enweghị nsogbu ma hụ ka ndị ahịa ha hapụrụ ịzụrụ ma ọ bụ kwaga saịtị saịtị nke asọmpi - ọ bụghị ihe egwu ịchọrọ iji ndị ahịa gị ekeresimesi a!
Tags: Krismaszuru ụwa ọnụ-eezumikembupu mbaimekọ ihe ụwaego obodoretailmbupu ọnụegotranslationntụgharị asụsụ weebụsaịtị
Nir Debbi bụ ngalaba-onye guzobere ya na Onye isi ahịa na ire ahịa na Global-e. Nir nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na atụmatụ atụmatụ yana mmepe azụmaahịa na ngalaba teknụzụ dị elu na nke ego. Tupu ịmalite ntọala Global-e, ọ rụrụ ọrụ dị ka SVP, Isi nke Strategy na BizDev na Bank Hapoalim, na-esote okwu dị ka Isi nke Retail Strategy maka ụlọ akụ ahụ. Ọ nwekwara MBA na B.Sc. na Economics, ma site na Mahadum Tel-Aviv.
Wzọ 11 ịbawanye ROI nke Ahịa Ahịa gị
Ihe Ntanetị Twitter: Otu esi eji Twitter (maka ndi mbido)